Voamarina ny antsipiriany maro samihafa momba ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny teny ifotoran'ny alatsinainy 9 martsa izao dia manakaiky ary manakaiky ary rehefa manakaiky ity daty fankalazana ny hetsika ity dia voasivana ihany koa ny antsipiriany bebe kokoa momba ny hetsika. vaovao «weareable» avy amin'i Apple. Ny loharanom-baovao voadinika akaiky ny fivoaran'ny Apple Watch dia nanambara ny antsipirian'ny asa vaovao sy ny fiasa izay hampidirina ao amin'ny Apple Watch, toy ny fiainana bateria tena izy, ny fampiharana ara-pahasalamana sy ny fanatanjahan-tena ary ny fiheverana voalohany amin'ny efijery mikasika izay hataon'i Apple ampidiro ao amin'ny famantaranandronao.
Efa henontsika ny tsaho sasany teo aloha fa tena ratsy ny fiainana bateria ary ilay fitaovana nanjary niadana rehefa niaraka tamin'ny Bluetooth miaraka amin'ny iPhone miankina amin'ny asany izay tsy maintsy nanatanterahany. Andeha hojerentsika raha marina ireo fanambarana ireo na tsia noho io fampahalalana vaovao io.
1 Mode bateria sy fitehirizana
3 Fampandrenesana sy personalization
4 Storage sy Music
5 Force Touch teknolojia sy Digital Crown
7 Fanakatonana sy fanamoriana
Mode bateria sy fitehirizana
Ny iray amin'ireo teboka manandanja indrindra amin'ny fitaovana elektronika azo entina dia ny faharetan'ny bateria, ary raha ny angom-baovao azonay hatreto dia tsy maintsy haverina isaky ny alina. Ny antenaina noforonina dia ny faharetan'ny bateria 2,5 ka hatramin'ny 4 ora fampiasana mahery raha oharina amin'ny ora 19 izay mety haharitra amin'ny fampiasana azy eo amin'ny fidirana amin'ny fampiharana, fampandrenesana na fangatahana fotoana tsotra.
Ankehitriny dia milaza ny vaovao vaovao fa nahavita nanatsara ny bateria i Apple manome hatramin'ny 5 ora fampiasana mahery vaika amin'ny fisoratana anarana ary miantoka fa tsy ho lany bateria amin'ny faran'ny andro amin'ny fampiasana antonony, dia mbola tsy maintsy ampangaina isan-kariva izy satria tsy haharitra amin'ny andro faharoa. Tanteraka izany noho ny maody "tahiry herinaratra" izay manapaka ny serivisy fanampiny tsy ilaina mba hitazomana ny bateria araka izay tratra. Io maody io dia ho mavitrika foana na dia miaraka amin'ny bateria aza fenoina tanteraka, manamaivana ny efijery mifanaraka amin'ny toe-javatra maivana ary mamerina ny fifandraisana amin'ny iPhone amin'ny haavon'ny angovo farafaharatsiny.
Tsy toy ny iPhone, raha ambany ny 20% ny haavon'ny bateria dia tsy mampiseho fampandrenesana eo amin'ny efijery izany, fa mivadika amber kosa ny mari-pamantarana bateria ary rehefa avy 10% dia avy eo io loko amber io ho mena. Nahazo antoka ihany koa fa ny haavon'ny batterin'ny iPhone dia tsy hisy fiantraikany lehibe amin'ity toe-javatra ity ny fifandraisana mitohy amin'ny famantaranandro, zavatra ankasitrahana.
Ny iray amin'ireo fanampiny mampiavaka indrindra an'ity Apple Watch ity dia ny sensor amin'ny tahan'ny fo. Rehefa miditra amin'ity rindranasa ity isika, dia haseho antsika ny aloky ny fo ka eo no ho eo rehefa manohina azy isika dia manomboka ny fandrefesana ny fitempon'ny fontsika. Ny loharanom-baovao dia manome toky fa ny fizotran'ny famakiana dia saika eo noho eo, tena marina. Misy ihany koa ny safidy handefasana ny valiny amin'ireo ombilahy mpampiasa sy ireo fiasa anatiny toy ny famakiana kaloria nohanina. Toy izany koa, ireo angon-drakitra ireo dia azo aondrana amin'ny iPhone hita ao amin'ny fampiharana Health.
Fampandrenesana sy personalization
Ho fanampin'ny tahan'ny fo sy ny ain'ny bateria, ny Apple Watch dia hampifangaro amin'ny alàlan'ny default ny statistikan'ny Fitness Statistics, Action, Clock, Weather, Music, Quick Setting, Kalandrie ary Maps. Misy mihitsy aza ny firesahana ivon-toerana fampandrenesana amin'ny fomban'ny iOS na Mac madio indrindra amin'ny alàlan'ny fidirana izany avy eo an-tampon'ny efijery.
Teboka iray hafa hodinihina ny fanaingoana ny saron-tava izay azontsika apetraka amin'ny famantaranandrontsika omeo rivotra hafa ny sfera, izay toa manana safidy marobe miaraka amin'ny fahafaha-manao maro.
Storage sy Music
Ny Apple Watch dia afaka mitahiry mozika na dia tsy ampiarahina amin'ny iPhone aza izy ireo, ireo mpandraharaha izay afaka nanandrana azy ireo dia nilaza fa ireo prototypes nanana tahiry 8 GBNa dia tsy maintsy karakaraina am-pitandremana aza ireo angon-drakitra ireo satria tsy mbola fantatsika raha hampiditra an'ity tahiry ity ny kinova farany. Izany no ilazako azy satria voamarina ihany koa fa ireo mpampita test dia misy mpampitohy tselatra izay tsy ho ao amin'ny kinova farany.
Mikasika ilay rindranasa, dia hozaraina amin'ny iPhone izy io ary afaka manafatra ny hirantsika, rakikira na playlists amin'ny alàlan'ny takelaka fanaraha-maso izay ahafahantsika mitondra izany mozika izany amin'ny mpandahateny ivelany na headphone Bluetooth.
Force Touch teknolojia sy Digital Crown
Ity misy teboka mazava, ary ny rehetra dia manaiky fa ny efijery amin'ity Apple Watch ity dia ny tsara indrindra napetraka ao amin'ny smartwatch Hatramin'izao, mampitombo io fahatsapana io noho ny Force Touch izay ahafahan'ny famantaranandro mampiavaka ny fikasihan-tanana tsotra amin'ny efijery amin'ny tsindry mihatra aminy hiditra amin'ny fanaraha-maso isan-karazany, ho fanampin'ny satroboninahitra nomerika dia manasongadina io fahatsapana voajanahary io rehefa mampiasa ireo fanaraha-maso ireo mamorona tonga lafatra fampifandraisana eo amin'ireo teknolojia roa ireo.
Izy io dia misoratra anarana ny mikasika sy ny hetsika na ny ambony, ny ambany, ny ankavia na ny ankavanana, tsy misy karazana klavier, manampy izany ho fanaraha-maso ny feo mba hampandeha ireo rindranasa na dia tsy mitovy aza ny fahafaha-manao toa an'i Siri, farafaharatsiny dia manao asa fototra kokoa izy io.
Ny chip S1 dia azo ampitahaina amin'ny chip A5 amin'ny iPod touch amin'izao fotoana izao izay mahatonga ny famantaranandro hahatsapa faingana fa miaraka amin'ny sasany saingy araka ny filazan'ny mpamorona hafa, ireo bokotra ireo dia mifandraika amin'ny WatchKit farany misy izay misy rehefa mametraka fampiharana 200 mahery hita fa miha-miadana kokoa ny valiny. Fitsapana teôlôjika io satria raha ny tena izy dia vitsy ny mpampiasa no mametraka an'io isan'ny rindranasa io, saingy teboka iray handraisana izany sy hamahana ireo fanavaozana ho avy.
Fanakatonana sy fanamoriana
Ny iray amin'ireo fanontaniana miverimberina indrindra amin'ity Apple Watch ity dia ny fomba famonoana azy. Araka ny loharanom-baovao ireo dia ny fanindriana sy ny fihazonana ny fomba hanaovana azy ny bokotra fifampiresahana mandritra ny fotoana maharitra izay hisehoan'ny bara-tsipika toy ilay miseho amin'ny iPhone. Hanana ihany koa ny fivoahana fampiharana tsy milamina amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny efijery fanidiana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra eo amin'ny sisiny ankavanana.
Mikasika ireo toe-javatra, dia hanana safidy hisafidianana ny maody bluetooth sy ny maody fiaramanidina isika nefa tsy misy natokana ho an'ny tontonana Wi-Fi izay heverinay fa hofehezin'ny iPhone mifandray.
Mbola miaraka amin'ny zava-drehetra Ny alatsinainy no andro hametrahantsika fisalasalana ary asehoy anay indray mandeha, ny mety an'ity fitaovana ity ka takian'ny mpampiasa maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny antsipiriany vaovao amin'ny Apple Watch dia voasivana miaraka amin'ny fahagagana hafahafa
Ampidiro ny fanavaozana Java farany tsy misy bara Ask.com mahafinaritra